सम्मोहन विद्या र वशीकरण उपचार « Sadhana
डा. विश्वबन्धु शर्मा ( मानसिक रोग विशेषज्ञ )
जब मैले ३८ वर्षअगाडि काम शुरु गरें, तिनताका उपचारको शैली अहिलेको भन्दा भिन्नै खालको थियो । सामान्य रोगको बिरामीलाई परामर्श मात्र दिएपछि ‘फेरि २ दिनपछि छलफल गरौंला है’ भन्यो भने अक्सर सबैले नै सोध्ने गर्थे, ‘खोई त मलाई औषधि ?’ उनीहरु भन्थे, ‘तपाईंको गफ गज्जबको छ, रमाइलो लाग्यो, यस्ता कुरा सुन्न पाउँदा, दबाई पनि त्यस्तै लेख्नुस् है तुरुन्त छुने । तपाईंका कुराले मात्र मलाई सन्चो लाग्दैन । अलि राम्रो ओखती दिनुस् है ।’
तर हिजोआज गम्भीर प्रकृतिका बिरामी आउँछन् । त्यस्ता बिरामीलाई औषधि नै चलाउनुपर्छ । तर पुर्जी लेख्न थाल्यो भने जवाफ आउँछ, ‘हैन म त दबाई नखाने, यस्तो साइड एफेक्ट गर्छ, किड्नी–कलेजो खान्छ । केमिकलविना उपचार गरुम् न ।’
म प्रश्नवाचक भावले बिरामीलाई हेर्छु । तुरुन्तै बिरामीको उत्तर आउँछ, ‘बुझ्नुभएन कि क्या हो, मैले औषधि नखाने, काउन्सिलिङ या त्यस्तै अरू उपचार विधिबाट इलाज गरौं भनेको । साइकोथेरापीबाट मेरो उपचार हुँदैन र ? ’यसरी बिरामीहरू साइकोथेरापी, काउन्सिलिङ, वैकल्पिक विधिमा विशेष रुचि राख्छन् । यस्तै मध्येको एउटा उपचार विधि हो, हिप्नोथेरापी ।
जो त्यसरी उपचारमा टिकेका थिए तिनीहरु दुव्र्यसनबाट मुक्त थिए । उनीहरुमा मदिराको गन्धले पनि बान्ता हुन्थ्यो । सम्मोहन–निद्रामा भएको व्यक्तिलाई ग्लासमा पानी हालेर रक्सी हो भनी पिउन दिँदा उनीहरुलाई रक्सीकै स्वाद आउँथ्यो र त्यहीँ बान्ता गर्दथे ।
यो विधिमा उपचार गर्ने व्यक्तिले बिरामीलाई मोहित पारी उसको ध्यान आफूतिर तानेर, चरम एकाग्रता सिर्जना गरी एउटै विषयमा केन्द्रित गर्दछ र त्यस्तो अवस्थाको बिरामीले थेरापिस्टको भनाइबाहेक अरु कुरामा ख्याल राख्न सक्दैन । बिरामीको ध्यान, सोच र केही हदसम्म उसको क्रियाकलाप पनि थेरापिस्टको वशमा हुन्छन् । मोहित पारी आफ्नो वशमा राख्ने हुनाले यो विधिलाई ‘सम्मोहन’ या ‘वशीकरण’ भन्नु उपयुक्त हुनेछ । यस लेखमा दुवै शब्दका प्रयोग भएका छन् र तीनको अर्थ हिप्नोसिस भनी बुझ्नुपर्दछ ।
मैले पढेको देश रुसमा यो विधि बढी नै प्रयोग हुन्थ्यो । एकजना गुरु यसका ज्ञाता थिए । खेलाडीको टिमले प्रतिस्पर्धामा भाग लिनुअगाडि उनले खेलाडीहरुको मनोबल यही माध्यमबाट उच्च बनाउँथे । अस्पतालमा भने सामान्य खालका मानसिक रोग, विशेष गरेर हिस्टेरिया (अहिले यसलाई डिसोसिएटिभ/कन्भर्सन डिसर्डर भन्छन्) जस्ता रोगमा प्रयोग गर्थे । त्यसबाहेक मदिरा दुव्र्यसनमा राम्रो परिणामसहित अत्यधिक प्रयोग हुन्थ्यो । लगातारको वशीकरणपछि दुव्र्यसनीमा मदिराप्रति वितृष्णा पैदा हुन्थ्यो ।
नियमित लामो उपचारपछि मदिरा सम्झँदा पनि वाक–वाक लाग्ने अवस्था आएपछि बिरामीलाई हप्तामा तीनपटक, अलि पछि दुईपटक, एकपटक र केही महिनापछि २–३ हप्तामा एकपटक सम्मोहन गरिरहनुपथ्र्यो । बिरामीलाई समूह–समूहमा राखेर पनि उनले वशीकरण सेसन सञ्चालन गर्दथे । मदिराको दुव्र्यसनीले भित्रैबाट छाड्न चाहेको रहेछ भने ऊ आफैं नियमित उपचारमा आउँथ्यो । जो त्यसरी उपचारमा टिकेका थिए तिनीहरु दुव्र्यसनबाट मुक्त थिए । उनीहरुमा मदिराको गन्धले पनि बान्ता हुन्थ्यो । सम्मोहन–निद्रामा भएको व्यक्तिलाई ग्लासमा पानी हालेर रक्सी हो भनी पिउन दिँदा उनीहरुलाई रक्सीकै स्वाद आउँथ्यो र त्यहीँ बान्ता गर्दथे ।
मलाई त्यस्तो दृृश्यले खुूब प्रभावित पारेकोले सम्मोहन विद्यामा विज्ञ बन्ने इच्छा लागेको थियो । ३८ वर्षअगाडि नेपाल फर्कंदा म आफूलाई यो विधिमा पोख्त छु जस्तो लाग्थ्यो । आफूले सिकेका परीक्षण विधि र उपचारका तरिकाहरु आफैं कसैको निगरानिविना स्वतन्त्ररुपले प्रयोग गर्न पाउँदा अर्कै फूर्ति आउँथ्यो । त्यस बेला मानसिक रोगका औषधि सीमित थिए । अहिले जस्तो सुरक्षित र प्रभावकारी पनि थिएन । त्यसैले शुरुका दिनमा औषधितिर भन्दा मनोवैज्ञानिक उपचार विधिहरु अर्थात् साइकोथेरापी (Psychotherapist) को प्रयोग गर्न मन पथ्र्यो ।
मानसिक अस्पतालमा काम गर्न थालेपछि (जुन त्यस बेला वीर अस्पताल परिसरमै थियो) अस्पतालका तत्कालीन निर्देशक डा। विष्णुप्रसाद शर्माले मलाई एकदिन महाराजगन्ज कलेजका मेडिकल विद्यार्थीलाई क्लास लिन लगाउनुभयो । त्यस बेलासम्म टिचिङ अस्पतालमा मानसिक विभाग शुरु भएको थिएन । विद्यार्थीका पढाइका कक्षा र बिरामी परीक्षण वीर अस्पतालमै हुन्थे ।
कक्षामा पसेर मैले ‘म हिप्नोथेरापीको प्रदर्शन गर्न चाहन्छु’ भन्नेबित्तिकै सबैका कान ठाडा भए । मैले हिप्नोसिस, हिप्नोथेरापी र यसको उपयोगिताका बारेमा छोटो जानकारी गराएपछि मञ्चमा एकजना विद्यार्थीलाई वशीकरण गर्ने (hypnotise) प्रस्ताव राखें । इच्छुक विद्यार्थी मञ्चमा आए ।
आजका सुरक्षित र प्रभावकारी अत्याधुनिक औषधिलाई ‘हानिकारक रसायन’ भनेर सेवन गर्न तयार नहुने व्यक्तिहरुका लागि सम्मोहन विधि र वशीकरण राम्रो विकल्प हुन सक्छ ।
मैले भनें, ‘हेर्नुस्, यो जादु हैन, उपचार विधि हो । बिरामीले निको हुने अभिलासा राखेर थेरापिस्टप्रति सहयोगी बने भने मात्र सम्भव हुन्छ । तर हेरौं न, यसले कसरी हिप्नोटाइज गर्ने रैछ रु अथवा यसको प्रयासलाई विफल पारिदिन्छु भन्ने खालका सोच राखेर मनमनै प्रतिशोध गर्‍यो भने वशीकरण सम्भव हुँदैन । त्यो तपाईंले पनि विचार गर्नुहोला ।’
उनले बडो सहजताका साथ भने, ‘हिप्नोसिस गरिँदा कस्तो अनुभूति हुन्छ रु त्यो जान्न र आफैंमा अनुभव गर्न म उत्सुक छु, सरलाई म पूर्ण सहयोग गर्छु ।’
वशीकरण गर्नुभन्दा अगाडि बिरामीसँग यस्तो बाचा गराउन उचित हुन्छ । यसले बिरामीलाई मनोवैज्ञानिक हिसाबले तयार गर्छ । मनका अन्तरकुन्तरमा शंका, अविश्वास, प्रतिशोध गर्ने विचार बाँकी रहेछ भने यस्तो संवादले त्यसलाई फालिदिन्छ ।
मञ्चमा सबैले देख्ने गरी आम्ने–साम्ने एकै खालका दुईवटा कुर्सी राखें । एउटामा उनलाई बसालें, अर्कोमा म । मैले आँखा जुधाएर एकटकले उनको अनुहारमा हेरिरहें । कक्षामा पूरै सन्नाटा थियो । केही हलचल नगरी चुपचाप उनलाई अलिबेर हेरिरहँदा उनमा केही बेचैनी र अप्ठ्यारो शुरु भयो ।
उनीभित्र छटपटी हुन थालेको अनुभव गरेपछि म बिस्तारै कुर्सीबाट उठें । उनलाई अझ बढी सहयोगी (suggestive) बनाउने यो विधि हो । वशीकरण गर्दा थेरापिस्टको कुरा सुनेर पूरा विश्वास गर्ने, जे कमान्ड गर्‍यो त्यही अनुभूति गर्ने अवस्थालाई ‘सजिलै वशमा पार्ने अवस्था (suggestive) भनिन्छ । यी एक–दुई सरल पूर्वतयारीपछि जब उनी पूरा suggestible भएको मलाई विश्वास भयो अनि मैले पट्यार लाग्दो एकोहोरो स्वरमा कमान्ड गर्न थालें–
‘मेरो स्वर मात्र सुनिन्छ ।’
‘तपाईंको वरिपरि सन्नाटा छ…, सुनसान छ ।’
‘तपाईंले मलाई मात्र सुनिरहनुभएको छ ।’
‘तपाईंको शरीर शिथिल भयो ।’
‘तपाईंको परेला गह्रौं भएका छन् ।’
‘ढिलो–ढिलो सास लिनुस् ।’
‘लामो सास लिनुस् ।’
‘तपाईंको मन शान्त छ ।’
‘मलाई मात्र सुनिरहनुभएको छ ।’
‘तपाईंलाई निद्रा लाग्यो ।’
‘तपाईं मस्त निद्रामा हुनुहुन्छ ।’
‘तपाईंको निद्रा गहिरो छ ।’
‘तपाईलाई आनन्दको अनुभव भएको छ ।’ (आदि–आदि)
जब उनी पूर्णरुपले वशीकरण भइसकेका थिए अनि मैले फेरि कमान्ड दिन थालें, ‘तपार्इंका हातखुट्टा फलामजस्तै भारी भएका छन्, घुँडामा टाँस्सिएका छन् । तपाईं हात उचाल्न सक्नुहुन्न । लौ, उचालेर हेर्नुस् त ∕’नभन्दै उनले उचाल्न सकेनन् । शरीरको हाउभाउबाट उनले प्रयास गरेको देखिन्थ्यो । तर हात साँच्चै नै घुँडामा टाँस्सिएका थिए ।
मैले अर्को कमान्ड गरें–
‘तपार्इंको वाक्य बन्द भएको छ ।’
‘तपाईं बोल्न सक्नुहुन्न ।’
‘ल, आफ्नो नाम भन्नोस् त रु’
उनले मुख बिगारे । ओठ चलाए । आँ…गरे । कस्तो–कस्तो आवाज निकाले तर बोली आएन । नाम उच्चारण गर्न सकेनन् । यी सब कुरा हलका विद्यार्थीले हेरिरहेका थिए । जबर्जस्त आँट सफल भएकोमा म दङ्ग थिएँ ।
यहाँनेर के ख्याल राख्नु जरुरी छ भने, सम्मोहन–निद्रामा भएको व्यक्तिलाई गलत काम गराउन सकिँदैन । उसको मनले नचाहेको र गलत लाग्ने कमान्ड दियो भने वशीकरणसमेत पूरै फेल हुन्छ र बिरामी हिस्टेरिया भएझैँ कराउने, उफ्रने गर्छ अनि एकछिन्पछि आफैं जाग्छ ।
मैले उनलाई केही समय त्यही निश्चल अवस्थामा राखेर यो विधिका फाइदा र कमी–कमजोरीको बारेमा हलका विद्यार्थीलाई बताएँ । प्रशिक्षण नपाएको र अनुभव पनि नभएको व्यक्तिले यस्तो विधि अपनाएर असफल भयो भने बिरामीलाई उल्टै हानि हुन सक्छ ।
यसमा रुचि भयो भने राम्रोसँग यसबारे अध्ययन गरेर वशीकरण गर्ने अनुभव भएका व्यक्तिसँग अभ्यास गर्न सुझाव दिएँ । यदि कसैलाई रुचि छ भने एमबीबीएसपछि मलाई सम्पर्क गर्नुस् भनेर अनुरोध पनि गर्न भ्याएँ ।
अनुकूल पर्दा आफ्नो छवि उकास्न कोशिश गर्नै पर्‍यो, नत्र कसरी प्रतिस्पर्धाको भेलमा टिक्ने रु कसरी डाक्टरी गर्ने ? त्यसपछि मैले उनलाई बिस्तारै सजग गराएँ । वरिपरिका हल्ला सुन्न लगाएँ, हात चलाउन कमान्ड गरें । अनि लामो सास फेर्न र आँखा खोल्न लगाएँ । त्यसपछि अन्तिम कमान्ड गरें–
‘अब तपाईं पूर्णतः पहिलाकै अवस्थामा फर्कनुभएको छ ।’
‘खडा भएर आफ्ना साथीहरुलाई आफ्नो अनुभव सुनाउनुस् ।’
पूरा सजग भएर साबिकको अवस्थामा आएपछि उनले आफ्नो अनुभव साथीहरुलाई सुनाए । उनले साँच्चिकै बोल्न प्रयास गरेको तर नसकेको, हातहरु फलामजस्तै गह्रौं भएर टाँस्सिएको र नउचालिएको अनुभव गरेछन् । सबै साथीहरुले ताली बजाएर प्रतिक्रिया दिए ।
यो घटनाले पछि सम्मोहन विद्या र वशीकरण उपचार (hypnotherapy) प्रति म यति आकर्षित भएँ कि अनुकूल पर्नासाथ प्रयोग गरिहाल्थें । प्रायजसो हिस्टेरिया, फोबिया र मदिरा दुव्र्यसनीमा कोशिश गर्थें । गम्भीर मानसिक आघात (यातना, मृत्युको खतरा, बलात्कार, अपहरण आदि) बाट गुज्रेको व्यक्तिलाई पी.टी.एस.डी. (post-traumatic stress disorder) भन्छन् । यस्ता बिरामीमा यो निकै प्रभावकारी मानिन्छ, यदि अनुभवी र जानिफकार व्यक्तिले प्रयोग गर्‍यो भने । तिनताका यस्ता व्यक्ति धेरै हुँदैनथे । मैले मुख्य त मदिरा दुव्र्यसनीमै धेरै प्रयोग गरें ।
तर मेरो उत्साह धेरै दिन टिकेन । उपचार चलुन्जेल दुव्र्यसनीमा मदिराप्रति घृणा पैदा हुने, सम्झँदा पनि वाक–वाक लाग्ने, गन्धले नै बान्ता हुने, तर उपचार छोडेको ३–४ हप्तामा त फेरि पिउन थालिहाल्ने । रुसमा पनि त्यस्तै हुन्थ्यो होला । तर त्यहाँको नियम कानुनअनुसार डाक्टरले खबर गर्‍यो या बोलाउन पत्राचार गर्‍यो भने जागिर, पेसा व्यवसाय र सामाजिक अवसरमा नै असर पर्ने हुनाले त्यस्तै कडा दुव्र्यसनीबाहेक अरुले बीचैमा उपचार छोड्ने आँट गर्दैनथे । तर जो आइरहन्थे ती ठीक रहन्थे ।
तर नेपालमा उपचार चालू राख्न मेरो हातमा थिएन, त्यसमाथि पनि निजी क्लिनिकमा । यस्तो उपचार चालू राखें भने म सफल हुन्न भन्ने मैले बुझें । बेइज्जत मात्रै हुन्थ्यो । एउटा सफल चिकित्सकको सट्टा चटकेको रुपमा प्रस्तुत हुन्थें । मैले वशीकरण विधिबाट उपचार गर्न चटक्कै छाडें ।
आज ३८ वर्षपछि मलाई लागिराछ कि त्यसरी चटक्कै छाड्नुको सट्टा आफूमा भएको खूबीलाई केही विशेष केसमा भए पनि आक्कलझुक्कल प्रयोग गर्नुपथ्र्यो । बरु बिरामीले बीचैमा छाड्दैन भन्ने सुनिश्चित गरेर मात्र र जो यसप्रति आकर्षित हुन्छन् उनमा मात्र भए पनि प्रयोग गर्नुपथ्र्यो । जति सक्यो धेरैमा प्रयोग गरेर चर्चित हुने चाहनाभन्दा एकादुई बिरामीलाई राम्रोसँग तयार गरेर प्रयोग गर्दै गरेको भए ममा त्यो क्षमता र अनुभव पनि वृद्धि हुँदै जान्थ्यो ।
अहिले साइकोथेरापीले नयाँ भूमिका स्थापित गरेको छ । विभिन्न विधिहरु प्रयोगमा छन् । नियमित उपचार प्रक्रियामा सी.बी.टी. (congnitive behaviour therapy) , आई.पी.टी. (inter-personal therapy) जस्ता विधि प्रभावकारी छन् । यहाँनेर महत्वपूर्ण कुरा के छ भने, यी विधिलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सम्मोहन विद्या (hypnothesis) , वशीकरण (hypnotherapy) सँग सम्मिश्रण गरेर प्रयोग गर्ने चलन आएको छ । त्यस बेला भन्दा आज हाम्रो देशमा पनि पी.टी.एस.डी.का बिरामी बढेका छन् । माओवादी द्वन्द्वले नेपाली जनतालाई दिएको सबभन्दा ठूलो ‘उपहार’ नै पी.टी.एस.डी. हो ।
मैले आफ्नो सीपलाई कुनै सुरतले जीवित राख्न सकेको भए आज यसलाई अझ प्रभावकारीरुपले प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो होला । तर त्यो बेला मलाई अनेकौं व्यावसायिक कठिनाइ पार गर्दै स्थापित हुनुपरेकोले यो विधिलाई निरन्तरता दिन सकिन । अन्त्यमा आजका सुरक्षित र प्रभावकारी अत्याधुनिक औषधिलाई ‘हानिकारक रसायन’ भनेर सेवन गर्न तयार नहुने व्यक्तिहरुका लागि सम्मोहन विधि र वशीकरण राम्रो विकल्प हुन सक्छ ।
तर यहाँनेर के बुझ्नुपर्छ भने, यो विधिबाट लाभ लिन उपयुक्त विशेषज्ञसित राम्रोसँग छलफल गरेर मात्र प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । तर भ्रामक विज्ञापनमार्फत अयोग्य र आफ्नो स्वार्थको लागि प्रयोग गर्न चाहने ठगहरु बाट उल्टो हानि पनि हुन सक्छ ।